Torchlite: Dijital ahia ahia na Ngwọta Njikọ Aka Ego | Martech Zone
Torchlite: Ahịa Ahịa na Ngwọta Njikọ Aka Na-emekọ Ihe
Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Tọzdee, Nọvemba 5, 2015 Douglas Karr
Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ahụrịrị okwu a Tom Goodwin, onye isi osote onye isi oche nke usoro na ihe ohuru na Havas Media:
Uber, ụlọ ọrụ tagzi kachasị n'ụwa, enweghị ụgbọ ala. Facebook, onye nwe mgbasa ozi kachasị ewu ewu n'ụwa, adịghị emepụta ọdịnaya. Alibaba, onye ahịa kachasị baa uru, enweghị ngwa ahịa. Ma Airbnb, onye na-eweta ulo obibi kacha ukwuu n’ụwa, enweghị ala na ụlọ.
E nwere ugbu a Companieslọ ọrụ 17 ijeri dollar n'ihe a na-akpọ azụmahịa na-emekọ ihe ọnụ. Companieslọ ọrụ ndị a enwetawo nnukwu ihe ịga nke ọma ọ bụghị site na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ, kama site na ịmaliteghachi ụzọ ha si eme ihe bara uru site na ndị na-achọ ihe na ndị nwere ihe ha ga-enye. Y’oburu na odi nfe, odi nma, odi n’ihi. Mgbe ụfọdụ ọgụgụ isi pụtara nanị ịghọta ihe doro anya.
Nye Susan Marshall, onye bụbu ọkaibe na-ere ahịa, ọ bịara doo anya na ụdị echiche a - imepụta njikọ kwekọrọ n'ụzọ zuru oke-agaghị aba uru na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa, ọ ga-adị mkpa.
Ndị ahịa enwetalarị ikwu na teknụzụ emeela ka ebe egwu dị; na obere azụmaahịa ahụ dị obere na nke ugbu a nwere ngwaọrụ iji sọọ mpịa na ndị juggernauts. Na omume, ọ dịghị mfe. Ọ bụ ezie na ngwa ahịa ahịa dijitalụ dị mma ma dị ọtụtụ karịa karịa ka ọ dị na mbụ, ụlọ ọrụ ka chọrọ ndị ọkachamara maara otu esi eji ngwaọrụ ndị ahụ iji nweta nsonaazụ kacha mma. Anyị eruola ebe ndị isi ahịa agaghị enwe ike ijikwa otu usoro ntanetị dijitalụ na-agbanwe agbanwe. Ọ na-achọ ndị ọkachamara, na maka ọtụtụ azụmahịa, ndị ọkachamara ahụ nwere ike ịbụ ihe niile ma ọ gaghị ekwe omume ịchọta.
Iji ka ndị ọrụ azụmaahịa na-achọ ọkachamara ịzụ ahịa na ndị ọkachamara ha chọrọ, Marshall kere Ọkụ - usoro mmekorita nke mmekorita nke n’enye ndi ahia obula ike iru ndi otu ahia ahia. Na ụzọ mgbochi ụlọ ọrụ ya, Torchlite na-enye ndị azụmaahịa ọrịre ahịa a na-achọ nke na-enyere ha aka ị nweta ọtụtụ netwọkụ ndị ọkachamara n'ahịa maka ịhazi na ime mkpọsa dijitalụ.
Ọkachamara ọ bụla, ma ọ bụ Ọwa ọkụ, ahọpụtara dabere na mkpa azụmaahịa achọrọ. Na-achọ ịkwọ ụgbọala ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị? Torchlite ga-adakọ gị na ọkachamara SEO nwere ahụmịhe na ụlọ ọrụ gị iji hụ na saịtị gị kachasị nke ọma na ndị ahịa gị nwere ike ịchọta gị.
Torchlite na-enye ndi ulo oru uzo ozo ka ha were ndi oru ulo ma obu ndi ozo. Tụlee ọnụahịa ha na ọnụego oge nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụgwọ ị ga-akwụ ndị ọkachamara n'ime ụlọ ($ 50,000 maka onye na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, $ 85,000 maka onye na-ere ahịa email, $ 65,000 maka ọkachamara SEO / Web), ị ga-ahụkwa etu enwere ike uru ego.
Ọkụ na-enyekwa ulo oru aka idebe usoro uzu ahia ha di. Inwe ohere n'ọma ahịa niile nke ndị ọkachamara nwere nka na-eji ihe ọ bụla ahịa ahịa dijitalụ pụtara na azụmaahịa agaghị adọka ma dochie teknụzụ ha dị.
Ulo oru nke na-eji Torchlite nwekwara nhọrọ Gbanwuo, pụta or gbanyụọ ụfọdụ usoro ịre ahịa n'ịntanetị ma ọ bụ mmemme n'oge ọ bụla. Ọ bụrụ na ahịa email, dịka ọmụmaatụ, gosipụtara na ọ kachasị mma maka ntụgharị ụgbọ ala ebe usoro ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ nke ọma, azụmaahịa nwere onwe ha ịgbanwe ọrụ ha ma weghachite akụ ha n'ụzọ dị mfe. Torchlite na-ejikwa usoro a niile site na mmalite ruo n'ọgwụgwụ, nke pụtara na ndị nwe azụmaahịa agaghị echegbu onwe ha gbasara ego, ijikwa ma ọ bụ nyefee onyinye ndị ọzọ.
Iji nyere ndị nwe ụlọ ọrụ aka ịdekọ ihe ndị Torchliters ha na-arụ ọrụ na ya, Torchlite na-enye ndị ahịa ọ bụla ihe njikwa akaụntụ raara onwe ha nye yana ị nweta dashboard n'ịntanetị. Site na ndọkata Torchlite, ndị ahịa nwere ọhụhụ zuru oke iji nyochaa ọganihu, lelee ọrụ aga-eme, kwado ọdịnaya ma soro otu ha si eru iru ebumnuche ahịa ha.
Nwere mmasị na ịnwale Torchlite?
Debanye aha maka ngosi nke mbupute mbupute Torchlite izizi taa!
Tags: mmekotaọrụ ahiateknụzụ ahịaezighi eziọwaọwa
Ndị ahịa na-ahọrọ nhọrọ na mmekọrịta mmekọrịta… ọbụlagodi Video
Etu esi esochi na-eduga na ire ahịa na ahịa